Lego Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & The Hydra Stomper ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
14 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 282 Views စာ0မှတ်ချက် AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster, 76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Disney, Disney+, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, reviews, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego Marvel နှင့်အတူ multiverse သို့တိုးချဲ့နေသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomperချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည့်ဇာတ်ကောင်များ၏တကယ့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်၊ သို့သော်ဤအပြိုင်စကြဝuniverseာပုံစံသည်၎င်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျရှိနိုင်၏ ဖောင်းပွ?
စတိဗ်ရော်ဂျာကို supersoldier သွေးရည်ကြည်အတွက်တစ်ခါမျှမရွေးချယ်ခဲ့ပါကအသို့နည်း။ ဒါကနောက်ဆုံးပေါ်စူပါဟီးရိုးအစုံကမေးချင်သောမေးခွန်းဖြစ်သည် Marvel Cinematic Universe သည်အပြိုင်အဆိုင်ပုံတူမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောမျောခြင်းဖြင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်ဇာတ်ကောင်များကိုလှည့်စားသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်တစ်ချက်နှင့်အတူကျန်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာဘာလဲ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Marvel ငါတို့ရှိသမျှသည်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြမော်ဒယ်?
theme: Marvel အမည်သတ်မှတ်မည် - 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 အပိုင်းပိုင်း: 343 အသေးစားပုံများ: 3
Lego: သြဂုတ်လ 1, 2021
ပထမတစ်ချက်မှာပုံသဏ္.ာန် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper ရှည်လျားသောလိုင်းအတွက်အခြားအဖြစ်လာမယ့်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောတစ်ခုဖြစ်သည် Lego မက္ကစီ။ The Marvel ဆောင်ပုဒ်သည်ဤစက်ရုပ်ယာဉ်များအတွက်လူစိမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ မကြာသေးမီကကြားဖြတ်များအပါအ ၀ င် AIM ကိုယ်စားလှယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 76164 Iron Man Hulkbuster, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem နှင့်အဘယ်သို့လျှင်အကယ်။ အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုတည်းသောသည်အခြားတည်ဆောက်? စီးရီး, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man.
ဒီအစုကိုတည်ဆောက်နေစဉ်၊ ထိုကဲ့သို့သောမလွှဲမရှောင်သာကွဲပြားခြားနားသောပြပွဲ (အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကပွဲမထွက်သေးသော်လည်းနောက်တွဲယာဉ်တစ်ခုရှိသည်) နှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်သင့်လျော်သောနေရာကိုထိုအသိအမှတ်ပြုရန်မခဲယဉ်းပါ။ Lego set ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြနိုင်ဘူး။ နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper နှင့် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man သံချပ်ကာဝတ်စုံများကိုသူတို့၏အဓိကတည်ဆောက်မှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ယခင်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မတူကွဲပြားမှုများစွာရှိသော်လည်းဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ မလေ့လာသင့်ပါ။ လည်စည်း -ins တန်ဖိုးထားကြလိမ့်မယ်။
သူ့ဟာသူ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper တစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျေနပ်စရာအတွေ့အကြုံစေသည်။ အရောင်များသည်အစတွင်ရှုပ်ထွေးပုံရသည် - partကြောင်းနောက်တွဲယာဉ်တစ်ခုအမြင်နှင့်အတူ icularly - ဒါပေမယ့်အစိမ်းရောင်တောက်ပတဲ့မှောင်မိုက်အသေးစားထွက်မတ်တပ်ရပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုတစ်ခုမှာ poseable အပိုင်းများကိုပုံစံနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပေါင်းစပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည် နည်းပညာ ဘောလုံးအဆစ်များအစားအသုံးပြုသည့်ဒြပ်စင်များသည်သံချပ်ကာစ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
အဆိုပါဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များအရိပ်လက္ခဏာအနည်းငယ်သာရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်လက်ရှိရှိသူများသည်ကောင်းစွာပေါင်းစည်းထားခြင်းခံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လုံးလုံးသေနတ်သမားများသည်အနီးအနားရှိမီးဖိုကပ်ခွာပါသောခဲယမ်းမီးကျောက်များအဖြစ်အရောင်အသွေးရှိသောလိမ္မော်ရောင်အပိုင်းအစများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်အပူအခြေခံသောလက်နက်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
စတစ်ကာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်မော်ဒယ်တွင်အသုံးပြုသောသူများသည်လိမ်းခြယ်သလိုခံစားမှုရှိပြီးထူးခြားထင်ရှားသောတည်ဆောက်ပုံ၊ အထူးသဖြင့် classic Captain America ဒိုင်းလွှား။ အခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံစံတွင် Hydra Stomper ၏စွမ်းအားအဖြစ်ဖြည့်ထားသောအလင်းရောင် -The-the-dark အုတ်တစ်ခုလည်းပါဝင်သည်။ အပြည့်အ ၀ အားသွင်းသောအခါတောက်ပသောအပိုင်းအစအလင်းပမာဏကိုပေးသည်။ အစုများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါထိတ်လန့်စရာကောင်းသော silhouette ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသောအသွင်အပြင်တစ်ခုမှာစက်ရုပ်ပုံသဏ္ofာန်၏ခိုင်မာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်ထူးခြားစွာပုံနှိပ်ထားသော faceplate ကိုသုံးသော ဦး ခေါင်းမှဖြစ်သည်။ ယင်းသည် rounded tiles များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် Hydra Stomper ၏အမိုးခုံးကိုကိုယ်စားပြုသောကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်၊ သို့သော်အတွင်းမှလေယာဉ်မှူးကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။
မည်သည့်ဘေးဘက်ထောင့်မဆိုမြင်တွေ့ရပါကစတိဗ်ရော်ဂျာ၏ပြုံးနေသည့်မျက်နှာကိုမဟုတ်မမှန်ခိုင်မာသောဝတ်စုံဖြစ်သင့်သည်။ ဒီကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒြပ်စင်တွေကိုသဘောကျမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအသေးစားပုံစံကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ mech အတွက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်စူပါဟီးရိုးအစုံများစွာကဲ့သို့ပင်အသေးစားဓာတ်ပုံများသည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်ဟု ငြင်းဆို၍ မရပါ။ ဤနေရာတွင်လိုင်းတွင်ရှိပြီးသား minifigure တစ်ခု၊ ချစ်မြတ်နိုးရသောဇာတ်ကောင်တစ်မျိုးအတွက်အခြားနှင့်အသစ်အတွက်အသေးစားရုပ်ပုံအသစ်လည်းပါဝင်သည်။ Lego Marvel.
ပြပွဲ၏ကြယ်ပွင့်ခြော Peggy ကို C ဖြစ်ပါတယ်artထို့အပြင်ဗိုလ်ကြီးကို C အဖြစ်လူသိများ erarter, ဒါမှမဟုတ်ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်။ သူမသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံး Avenger Captain America ၏ပွဲ ဦး ထွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ခေတ်သစ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသော်လည်းဗြိတိသျှအထိမ်းအမှတ်များရောထွေးနေသည်။
ဒီ minifigure တွင်တစ်ခုတည်းသောပုံနှိပ်ခြင်းကို torso တွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ အပြာနှင့်အနက်ရောင်အရောင်အဆင်းနှင့်ထူးခြားထင်ရှားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ဤဒီဇိုင်းသည်မကြာသေးမီကတွေ့ခဲ့သော What If …? နှင့်ကွဲပြားသည်။ နောကျတှဲရထား, ဒီ stealthier အခြားရွေးချယ်စရာအချို့မျိုးဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုသည်။
ခြေထောက်များနှင့်လက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသော်လည်း Captain C ၏သဏ္captureာန်ကိုဖမ်းယူရန်နောက်ထပ်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပါartဒီမှာပါ Peggy သည် Hydra ကိုတိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည့်အချိန်တွင်သူမတွင် Captain America မှငွေကြယ်ပွင့်အစားဗြိတိသျှလက်အောက်ခံဒေသများနှင့်တူညီသောဒိုင်းလွှားအသစ်တပ်ဆင်ထားသည့်ဒုတိယမျက်နှာပုံနှိပ်ခြင်းကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
အခြားအသေးစားရုပ်ပုံအသေးစားတစ်ခုမှာစတီဗင်ရော်ဂျာ၏အရပ်ဘက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အစိမ်းရောင်အင်္ကျီအဖုံးများနှင့်လေထီးများတပ်ဆင်ထားသည့်စစ်လေယာဉ်ကွင်းနှင့်ဂျက်လေယာဉ်မောင်းစက်ကိုမောင်းနှင်ရန်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးကိရိယာများကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံသည်သုံးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သောတည်ဆောက်သူများအတွက်အကျွမ်းတ ၀ င်အသေးစားပုံစံဖြစ်သည် 76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်, ဒါပေမယ့်ထံမှအချို့သောခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ထို့အပြင်အတူ ဟယ်ရီပေါ်တာ.
အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာ Tesseract ပုံစံဖြင့်သူ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ The Lego ဒီဇိုင်နာများသည်အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအာကာသကျောက်ကိုစံပွင့်လင်းသောအုတ်မှပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် Minecraft စကြဝmာတုံးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ပုံသဏ္whichာန်ဖြစ်သော ဦး ခေါင်း - အနည်းငယ်ကြီးမားလျှင်။
£ 27.99 / $ 29.99 / € 29.99 နှင့် 334 အပိုင်းပိုင်းအဘို့, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper စာရင်းအင်းကောင်းအရတန်ဖိုးနှင့်စျေးနှုန်း per-p ရှိသည်art အချိုး။ ကျေးဇူးတင်စရာ, က st ကနေနည်းတူတန်ဖိုးရှိခံစားရသည်art အရမ်းပြီးအောင်လုပ်ဖို့။ မော်ဒယ်တစ်မျိုးတည်း (သင်တစ် ဦး ကိုအီးရေတွက်ခြင်း မှလွဲ၍) ထည့်သွင်းနေစဉ်xtra ခဲယမ်းမီးကျောက်ဆောင်) ဤစျေးနှုန်းများအတွက်ပူဇော်သက္ကာများမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်ဟန်မတူပါ။ အရွယ်အစားသည်အတိအကျမှန်ကန်ပြီးအသေးအဖွဲပုံစံနှစ်ခုကိုရရှိခြင်းသည်လည်းထိုအရည်အချင်းကိုတိုးပွားစေသည်။
အခြားအဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင် Marvel အခြားအဘယ်သို့လျှင် ... mech စုံ တည်ဆောက်, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man - အုတ်အရေအတွက်၊ အသေးအဖွဲများနှင့်အခြားအရာများစွာသည်မှန်ကန်သကဲ့သို့ခံစားချက် Lego Group သည်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူစာအိတ်ကိုတွန်းရန်မကြိုးစားပါ။ ၏တန်ဖိုးကိုပြောစရာများစွာရှိပါသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper - သင်ငွေပေးချေတာကိုရိုးရိုးလေးပဲရတယ်။
p အဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု multiverse နှင့်အတူart နောက်ဆုံးပေါ်၏ Marvel streaming စီးရီး, ငါတို့မကူညီနိုင်ပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးအကယ်။ အဘယ်သို့လျှင် ... ? အစုံသုံး minifigures တစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူအလားတူ - စျေးနှုန်း mechs ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်စကြာ ၀ sameာတစ်ခုတည်း၏လုံးဝမတူညီသောခေတ်များအပေါ်အခြေခံထားသောအစုံနှစ်စုံကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်လုံးဝမမျှတပါ။ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီး 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper လျောက်ပတ်စွာစျေးနှုန်း၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Marvel ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် minifigures များစွာသောရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူမော်ဒယ်။
သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်တည်ဆောက်မှုအတွင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကိုးအကားအနည်းငယ်သည်သာမန်အားဖြင့်တန်ဖိုးထားခံရလိမ့်မည် Marvel ပရိတ်သတ်များနှင့် Peggy C ၏ပထမဆုံး minifigure ပါဝင်သည်arter သည်သူမ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည် - သူမ၏ထူးခြားသော (သို့သော်အကျွမ်းတဝင်) သောဒိုင်းလွှားကိုမပြောရန်။ အခြားအသေးစားပုံစံငယ်များသည်စိတ် ၀ င်စားစရာသိပ်မများသော်လည်း၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်အနည်းဆုံးနှစ်သက်ဖွယ်ဒြပ်စင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အထင်ကရဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွက်အခြားဗားရှင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Hydra Stomper ကိုနောက်တွဲယာဉ်များ မှလွဲ၍ အခြားအရာအဖြစ်မြင်ရသေးသည်။ အပေါ် Premiere သေးရှိပါတယ် Disney+ ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရာများအရစိမ်းလန်းစိုပြေသော mech သည်အလွန်တိကျသည်။ သငျသညျသို့သွားလျှင် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper ထံမှခြွင်းချက်တစ်ခုခုမျှော်လင့် Lego Marvelသင်သည်စိတ်ပျက်မိကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းမရှိသောသီးသန့်အသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်အတူသင့်တင့်သောအရွယ်အစားရှိသောဆောက်လုပ်ရေးဈေးကွက်သို့ရောက်နေလျှင်၎င်းသည်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။
အဘယျသို့လျှင် ... သင်ကအလုပ်ထောက်ခံခဲ့ကြသည် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Marvel ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ?
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper?
76201 Captain C ဘယ်လောက်ကြာကြာသင်အံ့အားသင့်မှာပါarter & The Hydra Stomper သည်တည်ဆောက်မှုအချိန်ကိုမိနစ် ၄၀ ခန့်ကြာမြင့်သည်။ သို့မဟုတ်သင်သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများကိုလေးစားရန်အခိုက်အတန့်ယူမည်ဆိုလျှင်ကြာနိုင်သည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper?
စုစုပေါင်းအုတ် ၃၄၃ ခု၊ ၇၆၂၀၁ ဗိုလ်ကြီးစီarter & The Hydra Stomper သည်စျေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းအသင့်အတင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Minecraft တစ်တောက် -in-the- မှောင်မိုက်အုတ်မှ ဦး ခေါင်း။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper?
76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & The Hydra Stomper သည်အရှည် ၁၅ စင်တီမီတာ၊ အနက် ၈ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၄ စင်တီမီတာရှိသည်။ မည်သည့်စင်ပေါ်တွင်မဆိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုအတွက်၎င်းသည် 'stomp' ကို Hydra Stomper ၌ထားလိုပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & The Hydra Stomper ကုန်ကျသလား?
ဒုတိယ Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? Set ကိုပေါင် ၂၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ / ယူရို ၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ 27.99 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man ထက်အနည်းငယ်စျေးသက်သာသည်။
← LEGO MASTERS ပြိုင်ပွဲဝင်သည်သူ၏အိပ်မက်ကို LEGO ဒီဇိုင်နာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
LEGO Rock Raiders သည်နောက်ဆုံးပေါ် LEGO podcast တွင်နက်ရှိုင်းစွာငုပ်ခြင်းခံရသည် →